In ka badan 10 ruux oo ku geeriyootay Qaraxyada Ismiidaaminta ee Garoonka Aadan Cadde agtiisa ka dhacay (SAWIRRO) - iftineducation.com
iftineducation.com – Faah-faahin ayaa laga helayaa tirada dadka ku dhintay Qaraxyo loo adeegsaday gaadiid oo ka dhacay meel ku dhaw Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho.
Inta la xaqiijiyay 12 ruux ayaa ku geeriyootay Qaraxyadaasi, dadka dhintay waxa ay isugu jiraan ciidamo ka tirsan Nabad Suggida Somaliya, kuwa ilaalo u ahaa Hay’ado UN-ka ka tirsan oo degan Aaga Qaraxa uu ka dhacay iyo dad shacab ah oo halkaasi maraayay.
Qaraxa ka dhacay meel ku dhaw Irida Ciidamada Amisom ee Xalane, ayaa la sheegay in loo adeegsaday gaari ka weyn kuwa raaxada ah, maadaama qaraxaasi uu ahaa mid jugtiisa si aad ah looga maqlay guud ahaan Magaalada Muqdisho.
Sidoo kale Qaraxa isagana ka dhacay Koontaroolka ciidamada Nabad Suggida ee Isgoyska Danwadaagta oo aanan wax badan ka Fogeyn Garoonka, ayaa la sheegay in loo adeegsaday gaari yar oo nooca raaxada ah.
Labadaasi Baabuur ee qaraxday ayaa waxaa kaxeynaayay dad Naftood haligayaal ah oo ka tirsan Ururka Al Shabaab.
Suxufiyiin tagay goobta Qaraxa uu ka dhacay waxa ay soo sheegayaan gaadiidka gurmadka deg dega ah in lagu qaaday dhaawacyada ka dhashay Qaraxaasi ee soo gaaray ciidamada iyo dadka shacabka ah.
Saraakiisha Nabadgelyada Dowladda weli ma aysan bixin faah-faahin ku saabsan sida ay wax u dhaceen, inkastoo Saraakiil ka tirsan Nabad Suggida ay sheegayaan in laga hortagay qaraxyadaasi.